के कोईरालात्रय एक भएकै हुन ? - Purbeli News
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर ०५, २०७५ समय: ८:४७:२१
नेपाली काँग्रेसमा लामो समयदेखि बिभिन्न गुट र उपगुटहरु सक्रिय रहेका छन । कोईराला र देउवापक्षले आआफनो गुट चलाउँदै आए । शेरबहादुर देउवा सभापति भएपछि संस्थापन पक्ष भएपनि कृष्णप्रसाद सिटौला लगायतले अर्को समुह खडा गरे । यिनै गुट र उपगुटका कारण पनि नेपाली काँग्रेसले तिनै तहको निर्बाचनमा नमिठो पराजय बेहोर्नुको एउटा कारण बन्यो ।
गिरिजाप्रसाद कोईरालाको देहवसानपछि ३ जना कोईराला पनि तिनतिर फर्किए । गिरिजापुत्री सुजता,महामन्त्री शसांक कोईराला र पछिल्लो समय प्रभावशाली मानिएका डा.शेखर कोईरालाबिच पनि लामो समयदेखि खासै मेल थिएन । तर केहिदिन अघि तिनैजना कोईराला बिराटनगरमा एउटै मालाभित्र गोलाकार भएर एकताको सन्देश दिए । उनीहरुले आफुहरु अब एक भएको र कोईरालाको बिरासत कायम राख्ने दाबी समेत गरेपछि काँग्रेसका तरंग सिर्जना भएको छ । सभापति देउवा सोमबार साँझ नै बिराटनगर आएर पार्टीका नेता कार्यकर्ता सँग छलफल समेत गरेका छन भने डा.शेखर सँग गोप्य बार्ता समेत गरेका छन ।
कोइराला परिवारमा तेस्रो पुस्ताका नेता भनेर चिनिने डा. सशांक, शेखर र नेत्रृ सुजता कोइरालाले एउटै माला पहिरिएर पार्टी भित्र परिवारका सदस्य एक भएको घोषणा गरेकै भोलीपल्ट सोमबार साँझ देउवा विराटनगर आइपुग्नुलाई धेरैले अर्थपुर्ण रुपमा लिएका छन । ‘विराटनगरबाटै कोइराला परिवारका नेताले एकता घोषणा गर्नु र त्यसको भोलीपल्ट देउवा विराटनगर आइपुग्नुले पार्टी भित्र एउटा तरंग नै ल्याएको छ, । उनले आगामी दिनमा पार्टीलाई कसरी एक ढिक्का बनाएर लैजाने, प्रमुख प्रतिपक्षीका रुपमा आगामी दिनमा कसरी भूमिका खेल्ने, पार्टी भित्रको गुटगत राजनीतिलाई कसरी अन्त्य गर्ने तथा भातृ संगठनमा देखिएका विवादलाई कसरी समाधान गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको बताएका छन ।
कोइराला परिवारका नेताबीचको एकताले गलत सन्देश प्रबाह गर्नुभन्दा पनि आगामी दिनमा विवाद रहित ढंगबाट पार्टी संचालन गर्नु र एकढिक्का भएर अघि बढनु जरुरी छ ‘एउटै परिवारका तीन नेताबीचको एकताले पार्टीलाई संगठित बनाउन थप मद्धत पुग्छ ।’ एकताले गाउँ, नगर, क्षेत्र, जिल्ला तथा केन्द्र सम्मै पार्टी एकतामा सहयोग पुर्याउन सबैले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्नु आबश्यक छ ।